Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Guul maxkamadeed oo kale Seychelles by Alain St. Ange
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Dadka • Wararka Seychelles
Alain St.Ange, oo ka mid ah saddexda murashax ee u taagan doorashada madaxtinimada Seychelles 2020 ayaa waxaa bartilmaameedsaday dadka u ololeeya siyaasadda Alexander Afriye wax yar uun ka hor doorashooyinka 2020. Qoraallada sumcad -xumada ah si loo sumcad -xumeeyo shakhsiyadda dalxiiska ee soo gashay tartanka madaxtinimada si ay u siiso Seychelles waddo ay kaga baxdo caqabadaha dhaqaale ayaa lagu sameeyay 'iimaan -xumo, waxay ahayd xaasidnimo iyo been -abuur iyo inaysan jirin cudur -daar macquul ah oo daabacaadda' 'ayuu yiri Alexander Pierre ayaa raaligelintiisa u gudbiyay Maxkamadda Sare ee Seychelles.
Alain St.Ange ee Seychelles ayaa ku guulaystay dacwad sumcad dil ah oo ka dhan ah Alexander Pierre jagooyinka Doorashada Madaxweynaha.
Jimcihii 3dii Sebtember Alexander Pierre ayaa qirtay mas'uuliyadda wuxuuna u gudbiyay xukun wuxuuna aqbalay inuu dib u bixiyo St. St.Ange khidmaddiisa maxkamadda iyo khidmadaha sharciga oo ka badan warqad raaligelin ah oo uu qirayo inuu ka qoomameeyay jagooyinkii uu qabtay Oktoobar 2019 isagoo sheegay in si xun loo sameeyay iimaanka, iyo inay ahaayeen xaasidnimo iyo sumcad dilid.
Mr Alexander Pierre wuxuu sii waday inuu ku caddeeyo dukumintiga raalli -gelinta ah ee uu u gudbiyay garsoore Gustave Dodin maalintii dacwadda “Waxaan la wadaagayaa cadhada iyo karaahiyada uu muujiyay Mr St.Ange. Waxaan qirayaa inay gebi ahaanba khalad ahayd oo aan dareenkayga lahayn inaan daabaco ”.
Waa garyaqaan Frank Elizabeth oo u soo muuqday Alain St.Ange iyo Basil Hoareau Alexander Pierre.
Frank Elizabeth, oo ah qareenka Alain St.Ange ayaa u sheegay saxaafada la soo ururiyey meel ka baxsan Maxkamadda Sare ee Seychelles in eedeyntu ay saameysay waxqabadkii doorashada St.Ange taas oo ah sababta maxkamad iyo raaligelin looga raadinayo maxkamadda.
Alain St.Ange oo ku guulaystay magdhaw ka dhashay toddobaadyo ka hor dawladda Seychelles ee Maxkamadda Rafcaanka ka noqoshada madaxweynihii hore Danny Faure ee warqaddii ansixinta ee shardiga u ahayd doorashooyinka UNWTO ee 2017 ee jagada Xoghayaha Guud ayaa sidaas yidhi guushan sharciga ah ee ugu dambaysay oo ay muhiim ahayd in loo soo jeesto Garsoorka marka wax walba ay fashilmaan. “Garsoorku wuxuu ahaan doonaa ilaaliyaha dhammaan xuquuqdeenna” ayuu yiri St.Ange kahor intuusan ku darin in u jeesashadooda ay tahay inay sii ahaato tallaabada marka mid la dhibsado oo la dareemo in si aan caddaalad ahayn loola dhaqmay.
Alain St.Ange wuxuu ahaa Xildhibaan la doortay oo ka tirsan Golaha Sharci -dejinta Seychelles laba xil oo loo igmaday ka hor inta aan loo magacaabin Wasiirka Xukuumadda. Wuxuu hadda yahay La -taliye Dalxiis iyo mid inta badan loogu yeero inuu wax ka qabto Shirarka Dalxiiska halkaas oo uu si joogto ah ugu sii raaxeysto si uu uga hadlo afka iyo qalbiga.
Qoraalka sawirka:- Frank Elizabeth iyo macmiilkiisa Alain St.Ange iyo Alexander Pierre iyo garyaqaankiisa Basil Hoareau oo la hadlaya saxaafada ku shiray guriga Maxkamadda